लोडसेडिङ सुरु हुन थालिसक्यो” अब पुनः कुलमान चाहियो-विजय लामा - Nepali in Australia
शनिबार बि’हान सामा’जिक स’ञ्जालमा ला’माले ले’खेका छन्, – फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन थालिसक्यो। बिस्तारै समय अवधी बडाउदै जाँदै छ! कारण देखाउदा सुख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्ने गर्छ्न ।
बिद्धुत प्रा’धिकरणको हा’किम साबले!!!के कुलमान घिसिङको पालामा चाहिँ सु’ख्खा याम लागेन अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो? प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाइ? ।
केही समय पछि फेरि इन्वर्टर (inverter) अनि जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर आउदैनन अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउदैन भन्न सकिन्न!!! यहि चालाले पुर्याउनु समय लाग्दैन।जनता भनेको के हो बुझ्नै ।
गाह्रो भैसक्यो कारण जे पनि चुप लागेर सहने??? हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ जुन देशमा शिर्श नेताहरुलाई झ,गडा गर्नमा नै फुर्सद छैन!! झै झगडा गर्न रोकेर देश बिकाशका काम कुरा पो गर्ने कि?? जय चन्द्र सुर्य!!!
काठमाडौं ।असाध्यै पढ्न मन छ तर घरको अबस्था निकै कमजोर छ त्यसैले पढ्न छाडेर बसेको छु हजुर । कुनै बेला सचिन परियारले आफ्नो अन्तरवा र्तामा आफुले आर्थिक अभाव का कारण बिचैमा पढाई छाड्नु परेको दु:खेसो गरेका थिए । आफुसगं अथाह प्रतिभा भएपनि उनीसगं न त प्रस्तुत गर्ने माध्यम थियो न त व्यक्त गर्ने साधननै ।
बाबु एक्लैले खाटमा आफ्नी छोरीको शव लिएर ३५ किलोमिटर यात्रा गरेको दृश्यले सबैको आँखा रसाउँछ !